Ukusetshenziswa Kwezinga Eliphezulu le-AV Fistula Needle Sets ifektri nabakhiqizi | Sanxin
Ukusetshenziswa Okukodwa kwe-AV Fistula Needle Sets
Ukusetshenziswa okukodwa i-AV. Ama-Fistula Needle Sets asetshenziswa nemijikelezo yegazi kanye nohlelo lokucubungula igazi ukuqoqa igazi emzimbeni womuntu futhi lidlulisele izingxenye ezicutshungulwayo zegazi noma zegazi emzimbeni womuntu. Ama-AV Fistula Needle Sets asetshenzisiwe ezikhungweni zezokwelapha ekhaya nakwamanye amazwe amashumi eminyaka. Kungumkhiqizo ovuthiwe osetshenziswa kabanzi yisikhungo somtholampilo se-dialysis yesiguli.
Ukusetshenziswa okukodwa kwe-AV Fistula Needle Sets kusetshenziswa nemijikelezo yegazi kanye nohlelo lokucubungula igazi ukuqoqa igazi emzimbeni womuntu futhi lidlulisele izingxenye ezicutshungulwayo zegazi noma izingxenye zegazi emzimbeni womuntu. Ama-AV Fistula Needle Sets asetshenzisiwe ezikhungweni zezokwelapha ekhaya nakwamanye amazwe amashumi eminyaka. Kungumkhiqizo ovuthiwe osetshenziswa kabanzi yisikhungo somtholampilo se-dialysis yesiguli.
◆ Inaliti ebukhali egobile ephindwe kabili e-Ultra inciphisa ubuhlungu nomonakalo wezicubu.
Idivayisi yokuphepha ekhethekile yokuvikela ukuvikela ukulimala kwe-iatrogenic ngezinga elikhulu kakhulu.
◆Umgodi ongemuva ovundlile nomklamo wephiko ojikelezayo ungakusiza ngempumelelo ukulungiswa kokugeleza kwegazi nengcindezi, okuzuzisa ukulungisa i-engeli yenaliti nokuqinisekisa ikhwalithi ye-dialysis. amashubhu
◆ Amafutha abicah acutshungulwa nge-silicification yesibili.Amashubhu enaliti athanjiswa ukucushwa okuyingqayizivele kwezobuchwepheshe Ukuqinisekisa ubukhali benaliti ngayinye, ukuhlolwa okugcwele kwesikhulisi kuyenziwa
◆ Ukwelashwa okuhle futhi okufananayo nokwenziwa ngosilika, ukuhambisana kahle kwezinto, kunciphisa ukumelana nokubhoboza.
◆ Ngemibala ehlukene, kulula ukubona amamodeli wezinaliti nokucaciswa
Amamodeli we-AV Fistula Needle Sets nokucaciswa:
Uhlobo oluvamile: Blue 15G, Green 16G, Yellow 17G, Red 18G.
Uhlobo lokuphepha: Blue 15G, Green 16G, Yellow 17G, Red 18G.
Uhlobo lwephiko olungaguquki: Blue 15G, Green 16G, Yellow 17G, Red 18G.
Uhlobo lwephiko lokuzungezisa: Blue 15G, Green 16G, Yellow 17G, Red 18G.
Langaphambilini I-Hemodialysis powder (exhunywe emshinini)
Olandelayo: Iphakethe le-catheter eliphakathi nendawo (le-dialysis)
Ukukhishwa Kwegazi Nokuhlanzwa
Ukuhlanzwa Kwegazi Emzimbeni
Ukwelashwa Kokuhlanzwa Kwegazi
Ukubhabha kusethelwe i-hemodialysis
Izesekeli ishubhu se-HDF
Imijikelezo yegazi eyinyumba yokusetshenziswa okukodwa
Umhlengikazi ikhithi ye-dialysis
I-fiber engenalutho i-hemodialyzer (ukuhamba okuphansi)